EYONA MIBALA YEPEYINTI EFANELEKILEYO - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Eyona mibala yepeyinti efanelekileyo
Apha sabelana ngemibala yepeyinti efanelekileyo yokwenza ikhaya lakho ligqame kwaye libe yindawo yokwamkela abahlobo kunye nosapho.
Ifoyer ayisiyondawo apho ulahla khona iposi xa usendleleni emnyango emva kosuku oluxakekileyo. Yindawo yokuqala wena okanye iindwendwe zakho ozibonayo xa zingena, indawo ethi wamkelekile ekhaya.
Kuba esi sithuba sihlala sincinci kwaye sinikezelwe ngokulula, umbala wakho wepeyinti uya kuxela imeko kunye nokuziva kwifoyer kwaye usete ithoni kulo lonke ikhaya lakho.
Oko akuthethi ukuba kufuneka ihambelane namagumbi akufuphi nayo, ingqalelo kwiinkcukacha kunye neengcebiso ezithile ezivela kumyili ziya kukunceda uthathe isigqibo malunga nento ofuna ukungena kuyo kwikhaya lakho malunga nawe.
Yiba nesibane seFoyer elungileyo
Ukuphucula imibala yoKutya kweNdawo engathathi cala
Ukongeza Imibala yeBold kuyilo lweFoyer
Iimbono zeFoyer emnyama
Ukukhanya kunye nobumnyama bayo. Wakhe wayibona ifoyer emnyama? Akusoloko kusamkelwa kakhulu. Kodwa ayisiyiyo imibala yepeyinti! Yimpazamo yokukhanya okwaneleyo.
Ukuba awunako ukukhanya kwendalo, ufuna ukuqiniseka ukuba ukukhanya kwakho kukhanya kwaye kwamkelekile.
Ukukhanya okuphezulu akunako ukubonelela ngokukhanya okwaneleyo ke jonga udonga lwendonga okanye ubude, izibane zetafile ezincinci ukubonelela ngokukhanya okwaneleyo ukujonga i-lipstick yakho esipilini okanye ukubona ngokulula ukuba zeziphi izihlangu ezakho njengoko uphuma emnyango ekuseni. Ngoku ukuba unesibane esihle, singathetha ngombala wepeyinti.
izibane ezijingayo zangasese
Sasihlala njalo sibona ukukhanya, ukungathathi cala kwezopolitiko kwiifoyers, kwaye ngesizathu esivakalayo. Kulula ukusebenza nazo kwaye zihlala ziyinto esele ikho ngoko sihlala nje nayo, sishiya ifoyer njengesiqhelo, nje ukuba sigqibe ukwenza umhombiso kwakhona ekhitshini okanye kwigumbi lokuhlala. Musa ukushiya nje ipeyinti yenqanaba lomakhi eludongeni.
Nika ubomi bakho bokungathathi hlangothi! I-grey eqaqambileyo, e-grey, okanye i-greige (grey kunye ne-beige idityanisiwe) njengamafu asezantsi ekhephu lasebusika lothando, yenza ifoyer yakho ibonakale ikhanya kwaye intsha kwaye idibene kakuhle nefenitshala elula kunye emnyama.
Kwidrama engaphezulu, sebenzisa ingwevu enzulu, njengamafu amnyama eendudumo zasehlotyeni. Isengathathi hlangothi kodwa inika indawo yakho ubunzulu obuncinci kunye nomphetho ococekileyo. Okwezo umbala odongeni ohambelana nomgangatho wokhuni umthunzi ogqwesileyo uya kuxhomekeka kuhlobo lomthi kunye nombala wawo.
Ukuba uthanda umbala nje, ungoyiki ukuhamba nepop enesibindi kwifoyer yakho. I-tomato ebomvu ebomvu, i-coral efudumeleyo, okanye isityebi, i-peacock eluhlaza okwesibhakabhaka yonke imibala enemibala yefoyer yakho.
Le mibala inokuba yinto encinci ukuba uyibeka kwindawo enkulu, kodwa kwifoyer encinci, zibonelela ngenani elifanelekileyo le-punch kunye nobuntu. Yonwaba kancinci ngale ndawo incinci kwaye uphefumle ubomi obutsha kuyo ngombala ongalindelekanga wombala.
Le mibala eqaqambileyo idlala kakuhle nangayo nayiphi na imihombiso njengoko iguqula wena usuka kwilizwe elixakekileyo ungaphandle uye kufudumala kunye nentuthuzelo yekhaya lakho.
ubungakanani bekhabethe esemgangathweni
Cinga ukungathathi hlangothi kuyadika kodwa ngaba ayingomntu othanda imibala eqaqambileyo?
Umbala omnyama kwifoyer yakho uvumela izibuko zakho kunye nokukhanya kukhazimle kwaye kungenza indawo yakho ibonakale inkulu kuba iindonga ziya kubonakala ngathi ziyawohloka. Ukuba ufuna into eyahlukileyo ngenene, eyenza ingxelo, hamba umnyama.
Umbala omdaka mnyama, njenge tshokholethi enyibilikiweyo, okanye umbala omsobo osisityebi wesityalo seqanda esivuthiweyo, simnyama kakhulu phantse simnyama. Inzulu, isityebi, i-edgy, yeyangoku kodwa ayiphelelwa lixesha, ayinasiqhelo kodwa ihlala ikho ngoku.
Le foyer yokungena inezibini Uyilo lwezinyuko ifaka isinyithi esenziwe ngombala omnyama kunye namanyathelo eenkuni ezikhanyayo okwahlukileyo.
Le mibala izisa ekhaya izimvo zobushushu, ukhuseleko kunye nentuthuzelo. Qiniseka ukuba uvavanya ii-swatches eludongeni ukuze imibala ingajongi njengodaka okanye buthuntu. Kwaye njengamaxesha onke, ukukhanyisa kubaluleke kakhulu ukuze indawo ingabonakali njengendlu yomhadi.
Isibuko esikhulu eseludongeni olujongene nomnyango okanye itafile enamaxesha athile izisa umdlalo ekhaya kwaye inceda ukubaneka ukukhanya ejikeleze igumbi.
izimvo zepleyiti zesilayiti
Yithathe kubaqulunqi, ungayihoyi ifoyer yakho, uyilo olulungileyo luye kuwo onke amagumbi ekhaya lakho!
Ungayamkeli into yokuba i-oatmeal paint-grade paint, yiya kubunewunewu obumnyama, imibala etyebileyo, i-pop enomdla yombala oqaqambileyo, okanye ukungathathi hlangothi ngoxolo ukwenza utshintsho oluhle ukusuka kwilizwe langaphandle ukuya ekhayeni lakho.
Ufuna ezinye izimvo? Ndwendwela le galari nangakumbi izimvo zefoyer kubandakanya imibala eyahlukeneyo yepeyinti kunye nezitayile zoyilo.
kufuneka nini iindwendwe rsvp ngo
ohlawulela isidlo sangokuhlwa sokuziqhelanisa
Uthando lwam lucaphula kuye
isicakakazi sombongo wentetho ebekekileyo
uya kuba ngumkhonzazana wam wekhadi lokuhlonipha